Fepetra fanomanana ny ITIL - 3 »ITS Tech Tech
Fanadinana fanomanana ITIL - 3
0 ny fanontaniana 40 vita
Ny fanontaniana 40 rehetra dia tokony hiezaka
Ny valinteny rehetra dia tokony asiana marika eo amin'ny taratasy nomena nomena
Manana minitra 60 ianao hamitana ity taratasy ity
Tsy maintsy manatratra 26 ianao na maromaro avy amin'ny marika 40 (65%) azonao hamaranana ity fanadinana ity
Tokony hamaritra lahatsoratra ianao.
Efa nahavita ny quiz aloha ianao. Noho izany dia tsy afaka manomboka izany intsony ianao.
Quiz dia mividy ...
Tsy maintsy miditra ianao na manoratra mba hanombohana ny quiz.
Tokony hamita ity fanadihadiana ity ianao, hanombohana ity fitsapana ity:
0 of 40 ny valiny dia namaly
Efa ela ny fotoana
Tonga ianao 0 of 0 Point, (0)
Tsy sokajy 0%
Misaotra anao nahomby ITIL Mock Test
fanontaniana 1 of 40
Inona no mahatonga ny fahitana ny mpanjifa sy ny vokatra ara-barotra?
Ny lanjan'ny serivisy
Ny fandaniana amin'ny tolotra iray
Ireo endriky ny fahombiazan'ny tetikasa (KPIs)
fanontaniana 2 of 40
Inona no dingana natao ampiasaina mba hampitahana ny sandan'ny servisy vaovao atolotra miaraka amin'ny lanjan'ny asa fanompoana nosoloany?
Asa fitantanana ny portfolio-service
Sarin'ny serivisy fanompoana
fanontaniana 3 of 40
Inona no tsy anisan'ny sehatra fananganana serivisy?
Ny famolavolana sy ny fitazonana ireo fonosam-pifandraisana hafa ilaina
Famokarana kalitao, tetikasa azo antoka sy mandresy lahatra amin'ny serivisy vaovao na fampivoarana
Ny fanaraha-maso ny paikady momba ny serivisy sy ny fiantohana azy ireo dia hita taratra amin'ny drafitra fanokanana serivisy sy ny tetik'asa fanompoana novokarina
Mamaritra ny fahombiazany sy ny fahombiazan'ny drafitry ny serivisy sy ny rafitra fanohanana
fanontaniana 4 of 40
Inona ny fifanarahana ara-dalàna atao ka mahatonga ny fifandirana mety hitranga eo amin'ny mpanome tolotra IT sy ny mpamatsy any ivelany?
Fifanarahana momba ny asa fifanekena
Fifanarahana eo amin'ny sehatry ny fanompoana
fanontaniana 5 of 40
Iza avy no sokajy mpamatsy?
fanontaniana 6 of 40
Inona no voafaritra ho "fiovan'ny fanjakana izay manan-danja amin'ny fitantanana ny serivisy"?
fanontaniana 7 of 40
Tsy misy tanjona na tanjona amin'ny fitantanana olana?
Mba hisorohana ny olana sy ny loza mitranga
Mitantana ny olana mandritra ny androm-piainany
Hanavao ny fanompoana ho an'ny mpampiasa iray
Hanafoana ny loza mitranga
fanontaniana 8 of 40
Inona no tsy tanjon'ny fikarakarana fitantanana ny IT?
Fampiharana haingana ny fahaiza-manao hanamarinana ny tsy fahombiazan'ny fiasan'ny IT
Fanomezana fanatsarana ara-pihetseham-po mba hahazoana ny vola vidiny
Fitantanana ny famoaham-peo amin'ny endriny media (DML)
Fikojakojana ny toetoetry ny fomba hahatratrarana ny fahamarinan-toerana isan'andro sy ny asa atao
fanontaniana 9 of 40
Inona no andraikitry ny tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny dingana iray?
Mpitantana ny serivisy
fanontaniana 10 of 40
Iza amin'ireto manaraka ireto dia ampahany amin'ireo lafiny dimy amin'ny drafitra fanompoana?
Asa vahaolana amin'ny serivisy vaovao na niova
Politique fitantanana sy toro lalana
Fitakiana ara-barotra sy fitantanana
Ny rafitra teknolojia sy ny famolavolana drafitra
1 sy 2
3 sy 4
1 sy 4
fanontaniana 11 of 40
Ny fanambarana BEST dia mamaritra ny hasarobidin'ny sehatry ny asa fanompoana amin'ny orinasa?
Manohana ny famoronana ny portfolio-tsosialy izy io izay hahomby amin'ny fampiasam-bola
Manao fitsaboana izy mba hampitomboana ny fatokisana fa ny tolotra vaovao dia hihaona amin'ny mpanjifa
Manamaivana ny fampiharana ny serivisy izy amin'ny fiantohana ny famolavolana paikady fananganana serivisy
Mampihena ny faharetan'ny fotoana sy ny faharetan'ny fanodinana serivisy amin'ny orinasa
fanontaniana 12 of 40
Iza no tompon'andraikitra amin'ny famokarana ny fonosam-panodinana serivisy (SDP)?
Fanamarinana ny fanompoana ary fitsapana
fanontaniana 13 of 40
Inona no antsoina hoe 'C' amin'ny 'RACI'?
fanontaniana 14 of 40
Ny famolavolana ny serivisy IT dia mitaky ny fampiasana ny 'Ps 4' amin'ny fomba mahomby sy mahomby. Inona ireo 'efatra Ps' ireo?
Olona, ​​dingana, mpiara-miasa, fampisehoana
Ny fahombiazana, ny dingana, ny vokatra, ny drafitra
Olona, ​​dingana, vokatra, mpiara-miasa
Olona, ​​vokatra, drafitra, mpiara-miasa
fanontaniana 15 of 40
Inona ny fanambarana momba ny fivoriana famerenana amin'ny serivisy dia FALSE?
Ny hetsi-panoherana avy amin'ny fiverenan'ny serivisy dia tsy maintsy omena ny mpandraharaha
Ny fivoriana dia tokony hatao tsy tapaka mba hamerenana ny fahombiazan'ny asa fanompoana
Tokony hodinihina mandritra ny fivoriana ny olana momba ny fotoana ho avy
Tokony handinika ny fandrosoana sy ny fahombiazan'ny drafitra fanatsarana ny serivisy (SIP)
fanontaniana 16 of 40
Inona no tanjon'ny fitantanana fidirana?
Mba hamaliana tsara ny fangatahana fanomezana amin'ny serivisy
Mba hahitana ny fiovan'ny fanjakana izay manan-danja amin'ny fitantanana ny serivisy IT
Hanampy amin'ny fampahalalana ankapobeny, fitarainana na fanamarihana
Mba hampihenana ny fiantraikan'ny toe-javatra tsy azo sakanana
fanontaniana 17 of 40
Ny dingana avoakan'ny fanatsarana ny serivisy (CSI) momba ny fanompoana dia ny BEST izay voalaza ao amin'ny fehezan-teny hoe: 'Mahatakatra sy manaiky ny laharam-pahamehana amin'ny fanatsarana mifototra amin'ny fampivoarana lalindalina kokoa ireo fitsipika voafaritra ao amin'ny fahitana'?
Aiza no tiantsika hatao?
Ahoana no ahatongavantsika any?
Tonga tany ve izahay?
fanontaniana 18 of 40
Inona ny dingana arovana izay mandrindra ny loharanom-bola hiantohana ny fanorenana ny serivisy amin'ny fanatanterahana asa?
Fivoaran'ny drafitrasa sy ny fanohanana
fanontaniana 19 of 40
Ny dingana arahina momba ny fivoaran'ny serivisy dia ny hampivoarana ny tolotra IT amin'ny alàlan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fampivoarana ny serivisy IT.
fanontaniana 20 of 40
Inona no karazana fampahafantarana tokony halefa rehefa tapitra ny tokonam-baravarana, misy zavatra niova na tsy nahomby?
Fiovàna dia ilaina
Hetsika vonjy taitra
fanontaniana 21 of 40
Inona no antony mahatonga ny fitantanana ny fitokonan'ny fifandraisana amin'ny serivisy?
Mba hahazoana antoka fa ireo firaketana ireo dia alefa amin'ny mpanjifa rehetra
Mba hahazoana antoka fa voarakitra an-tsoratra ny fehezan-drakitra diso (CI)
Mba hahazoana antoka fa ny fotoana famaranana ny fifandonana dia mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa
Mba hahazoana antoka fa azo atao ny manatona ny mpanjifany
fanontaniana 22 of 40
Iza amin'ireto no tsy zava-kendren'ny fizotran'ny fanovana?
Mba hahazoana antoka fa voarindra ao amin'ny rafitra fitantanana configurations ny fanovana rehetra ao amin'ny lahatahiry
Mba hiantohana fa ny fanovana dia voarakitra sy nohamarinina
Mamaly ny fangatahan'ny raharaham-barotra sy ny IT amin'ny fanovana izay hampifanaraka ny tolotra miaraka amin'ny filàn'ny orinasa
Manolotra sy manara-maso ny serivisy serivisy amin'ny sehatra tapak'aina amin'ny mpampiasa raharaham
fanontaniana 23 of 40
Inona no famaritana BEST amin'ny famoaham-baovao mahazatra?
Fitehirizam-boky mahasoa, izay misy tahirin-tsarimihetsika sy tahirin-kevitra farany momba ny rindrambaiko
Dokam-barotra mifototra amin'ny fampahafantarana mazava momba ny serivisy iraisam-pirenena rehetra, anisan'izany ireo azo ampiasaina amin'ny famokarana
Fitehirizam-piarovana azo antoka izay misy tahirin-kevitra voafaritra amin'ny endriny rehetra azo alaina sy voatahiry avokoa
Kitapo sy fitaovana ampiasaina amin'ny fitantanana fahalalana, fampahalalam-baovao ary data
fanontaniana 24 of 40
Inona no zava-miseho lehibe mitaky?
Tsy dia maika loatra
Kely ela kokoa
fanontaniana 25 of 40
Inona no TSY rafitra misy ny biraon'ny serivisy izay voafaritra ao amin'ny torolàlana momba ny serivisy ITIL?
fanontaniana 26 of 40
Inona no famaritana BEST ny fitantanana ny serivisy?
Fikambanana iray manome tolotra fifanekena ho an'ny mpanjifa anatiny sy ivelany amin'ny alàlan'ny katalaogin'ny serivisy
Asa maromaro momba ny fahaiza-manao mahomby ho an'ny mpanjifa amin'ny endriky ny serivisy
Mpanome tolotra manokana ao anaty serivisy izay tafiditra ao anatin'ny sehatry ny orinasa mpanjifa
Ny loharano ampiasaina hanomezana lanja ny mpanjifa anatiny sy ivelany amin'ny alalan'ny serivisy
fanontaniana 27 of 40
Inona no ohatra iray amin'ny fanamafisana ny serivisy momba ny serivisy?
Ny mpanjifa dia afaka mampiasa mpiasa an-tsokosoko bebe kokoa mandritra ny fotoana fohy
Ny fahafaha-manompo dia afaka manitsy ny valin'ny fangatahana
Ny fangatahana amin'ny tolotra vaovao dia azon'ny tompon'andraikitra amin'ny serivisy atao
Afaka mihena ny fahaizan'ny biraon'ny serivisy mba hisorohana ny mpampiasa azy amin'ny fotoana itrangany
fanontaniana 28 of 40
Inona ny fahaiza-mitantana amin'ny fitantanana fahaiza-manao mifantoka amin'ny fitantanana, ny fanaraha-maso ary ny faminaniana momba ny fampisehoana farany?
Fitantanan-draharaha momba ny fanompoana
fanontaniana 29 of 40
Inona no famaritana BEST amin'ny fanompoana?
Izany dia fitaovana entina hanomezana lanja ny mpanjifa amin'ny fanamorana ny vokatra araka ny fomba voafaritra azy ireo
Izany dia fitaovana entina hanomezana lanja ny mpanjifa amin'ny fanamorana ny vokatra tian'ny mpanjifa mba hahazoana raha tsy misy ny fandaniana manokana sy ny loza
Izany dia fitaovana entina hanomezana lanja ny mpanjifa amin'ny fanamorana ny vokatra 100 isan-jaton'ny fotoana
Izany dia fitaovana entina hanomezana lanja ny mpanjifa amin'ny fanamorana ny valim-pifidianana voalaza ao amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena (OLAs) sy ny fifanarahana amin'ny serivisy (SLA)
fanontaniana 30 of 40
Inona ny lisitry ny CORRECT momba ny fampiasana ny CSI?
Teknolojia, mpanjifa sy orinasa
Business, serivisy ary teknolojia
Customer, business and process
Dingana, teknolojia ary serivisy
fanontaniana 31 of 40
Iza amin'ireto no tokony hanova modely?
Ireo dingana natao mba hiatrehana ny fanovana
Iza no tompon'andraikitra amin'ny hetsika, anisan'izany ny fiakarana
Timescales sy fivoahana ho fanatanterahana ireo hetsika
Fomba fikarakarana fitarainana vokatry ny asa
1, 2 ary 3
1, 2 ary 4
1, 3 ary 4
2, 3 ary 4
fanontaniana 32 of 40
Inona no tanjon'ny fitantanana ny asa fanompoana?
Ny fanatanterahana ny asa atao amin'ny serivisy ilaina hanohanana ny serivisy IT mbola misy
Mba hahazoana antoka fa ampy ny fahaizana omena ny fahombiazan'ny asa fanompoana
Mamorona sy mameno ny lisitry ny serivisy
Mba hahazoana antoka fa omena ny serivisy iraisam-pirenen'ny serivisy ho an'ny tolotra IT rehetra amin'izao fotoana izao
fanontaniana 33 of 40
Inona no tanjon'ny famotsorana sy fametrahana fitantanana?
Mamaritra fomba sy fomba fitsaboana ampiasaina amin'ny fikarakarana sy fanaraha-maso ny fanovana rehetra
Mba hahazoana antoka fa ny fanovana rehetra amin'ny fananana asa sy ny fananganana (CIs) dia voarakitra ao amin'ny rafitra fitantanana fanovana (CMS)
Mba hiantohana fa mety hitranga ny fiatrehana ny varotra ankapobeny
Mamaritra sy manaiky ny famotsorana sy fametrahana planina amin'ny mpanjifa sy ny mpandray anjara
fanontaniana 34 of 40
Inona no tsy ao anatin'ny sehatry ny fitantanana catalogan'ny serivisy?
Fampandraisana anjara amin'ny famaritana ny serivisy
Fifandraisana eo amin'ny serivisy rehetra sy ny tolotra fanohanana
Fifandraisana eo amin'ny katalaogin'ny serivisy sy ny portfolio-service
Fanatanterahana fangatahana tolotra ara-barotra
fanontaniana 35 of 40
Ahoana no sokajian'ny vondrona, ny ekipa, ny sampan-draharaha ary ny fizarana?
fanontaniana 36 of 40
Inona no dikan'ny fiovana efa nomena alalana?
fanontaniana 37 of 40
Inona no azon'ny rafitra fitantanana fantsona (CMS)?
Data, fampahalalana ary fahalalana
Betsaka ny fitantanana ny fametrahana configuration (CMDB)
Fepetra momba ny fanompoana ary fifanarahana
Fepetra manokana momba ny fanompoana sy rindrambaiko
1 sy 3
2 sy 4
fanontaniana 38 of 40
Inona no tanjon'ny fandrindrana ny fandrindrana?
Mba hanomezana teboka tokana amin'ny fanaraha-maso ny hetsika sy ny dingana rehetra ao anatin'ny sehatry ny serivisy momba ny serivisy
Mba hahazoana antoka fa ny drafitry ny serivisy rehetra dia manana fahafaham-po ho azy
Ny fametrahana ny rohy rehetra eo amin'ny fizotry ny fikirakirana ny serivisy sy ny dingana rehetra amin'ny fiainana andavanandro
Ny fanaraha-maso ny fifandraisana rehetra avy amin'ny famolavolana hatrany amin'ny famokarana tontolo iainana
fanontaniana 39 of 40
Inona no tokony aseho amin'ny ampahany amin'ny dingana tsirairay?
Ny tompon'andraikitra amin'ny hetsika, ny politika arahina ary ny fanatanterahana asa atao
Ny tompon'andraikitry ny serivisy, fifanarahana amin'ny serivisy sy ny fepetra arahina
Ny tompon'ny politika, ny fifanarahana amin'ny serivisy ary ny dingana arahina
Ny mpitantana ny serivisy, ny fifanarahana amin'ny serivisy ary ny torolàlana momba ny asa
fanontaniana 40 of 40
Inona no azo ampiasaina mba hamaritana ny fiantraikan'ny olana iray?
DML (Digital Media Library)
Ny rafitra fitantanana ny rafitra (CMS)
Ny fepetra takiana (SOR)
Fitsaboana amin'ny serivisy (SOP)